Allgedo.com » 2012 » July » 18
Home » Archive Daily July 18th, 2012 Ra’isal wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi oo Isbitaal ku yaala magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu daaweynayo. Jul 18, 2012 Brussels, Belgium (AOL) - Ra’isal wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi oo door weyn kaga jiray la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta mayalka adag ee Al-shabaab oo hadda ku jira Isbitaal ku yaala magaalada Brussels ee dalka Belgium ayay Dublumaasiyiin aan la magacaabin u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP in ay xaaladdiisa caafimaad meel qatar ah mareyso.
Hogaamiyahaan oo mar si weyn u aaminsanaan... Qarax Galaaftey nolasha 7 caruur ah oo ka dhacay Deegaan ka tirsam Magaalada Baydhabo. Jul 18, 2012 Baydhabo, Somalia (AOL) – Wararka ka imaanayo magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in tuulada lagu magacaabo Kabankooka oo magaalada Baydhaba u jirta illaa iyo 15 mayl uu ka dhacay qarax aad u balaaran kaasoo galaaftay nolasha 7 caruur ah.
Qaraxaan oo ahaa mid aad u weyn ayaa wuxuu ka dhashay miinada dhulka lagu aaso oo ay ku ciyaarayeen caruurtaas, taasoo taalley meel aan... Markab laga leeyahay Taiwan oo ay Burcad-badeedu sii daysay. Jul 18, 2012 Warar la xaqiijiyay oo hadda nasoo gaaray ayaa sheegaya in kooxaha Burcad-badeedda Soomaaliya ay sii daayeen markab laga leeyahay waddanka Taiwan, kaasoo ay in muddo ahba haysteen.
Markabkaan oo ay la socdeen 25 qof oo shaqaale ah oo u ku kala dhashay wadamada China iyo Vietnam ayay kooxaha burcad-badeeda ah ee soomaaliya gacanta ku dhigeen sanadkii 2010 ka.
Warar kala duwan oo is khilaafaya oo la’isla... Guddiga Gal-jubba oo ka tacsiyeeyay dilkii Muqdisho loogu geystay Dr. C/xakiin Khaliif Shire. Jul 18, 2012 Jaaliyadda Gal-jubba ee London, waxay tacsi u dirayaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Dr. C/xakiin Khaliif Shire oo ka mid ahaa jaaliyadda, maalinkii shalayna si gardaro bareer ah loogu dilay magaala Muqdisho.
Waxan Ilaahay uga baryeynaa in uu jannadiisa geeyo simir iyo iimaanna ka siiyo qoyskii, eheladii, saaxiibadii, macaariiftiisii iyo dhmaan jaaliyadda.
Waxan cabaareyneynnaa falkaas foosha... Rush to Judgment and the Distortion of Facts: Reading the Monitoring Groups’ Report. Jul 18, 2012 The recently leaked [confidential] report prepared by the Somalia-Eretria Monitoring Group (SEMG) represented an opportunistic and propaganda feast for some of Somalia’s fledgling media groups, whose major attributes include the lack of ethics and professional management. In that regard, these media groups, call them propaganda organs for sectarian political objectives, wasted no time to distort... Madaxweynaha Gal-mudug oo qaliin dhanka wadnaha ah lagu sameeyay. Jul 18, 2012 Madaxweynaha maamulka Gal-mudug Satate ayaa waxaa lagu sameeyay qaliin dhanka wadnaha ka dib markii ay soo wajahday xaalad caafimaad daro.
Caalim ayaa maalmo badan xanuunsanaayay waxaana xanuunkiisa u soo shaac baxay xilli uu ku sugnaa wadanka Iskutaga Imaaraadka carabta.
Xubno kamid ah maamulka Gal-mudug ayaa u sheegay Radio Xamar in uu jiro xidid dhanka wadnaha oo beeldareenaayay dhiiga laakiin qaliin... Ciidamada dowladda TFG oo howlgalo ka sameeyay degmooyinka Yaaqshiid iyo Hilwaa ee Muqdisho. Jul 18, 2012 Ciidamada dowladda TFG ayaa howlgalo ka sameeyay degmooyinka Yaaqshiid iyo Hilwaa ee gobalka Banaasdir kuwaa oo dad iyo hub lagu soo qab qabtay.
Ciidamada ayaa la sheegay in ay ku faafeen xaafadaha degmooyinka Hilwaa iyo Yaaqshiid, waxaana ay soo qabteen dad badan oo la sheegaayo inay ka mid yihiin Xarakada Shabaab.
In ka badan 20 ruux oo dhalinyaro u badan ayaa howlgalkaasi lagu soo qabtay iyo hub... Dibad bax maanta ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobalka Banaadir. Jul 18, 2012 Degmada Xamar Jajab waxaa maanta dibad bax balaaran ka dhigay dadweyne aad u badan oo barakacayaal ahi kuwaa oo ka cabanaayay xaalad nolol xumo oo dadkaasi soo wajahday.
Dadkaan ayaa ka cabanaaya maamulka degmadaasi gaar ahaan gudoomiyaha oo ay sheegayeen inuu ka leexsaday raashiin sama fal ah oo loogu talagalay.
Dibad baxa oo si xowli ah u socday ayaa ugu dambeen waxaa halkii lagu banaanbaxaayay... Dagaal maalintii Labaad ka socda Gedo. Jul 18, 2012 Dgaal u dhaxeeya ciidamada dowladda KMG oo kaashanaya kuwa Kenya iyo Al-shabaab ayaa ka soconaaya maalintii Labaad gobalka Gedo.
Dhanka kale barakac aan horay loo... Radio Allgedo/ Waraysiyo